व्यापार घाटा ३८.४%ले बढ्यो, रेमिट्यान्स ४.९%ले घट्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा व्यापार घाटा ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनबाट यस्तो देखिएको हो। माघसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ३८.४ प्रतिशतले बढेर रु. १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो घाटा ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा...
रिपोमार्फत रु. १० अर्ब बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि फागुन २६ गते (बिहीबार) रु. १० अर्बको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले १४ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य...
भोलिबाट आउँदैछ चलनचल्तीमा रु. १ दरको नयाँ सिक्का, यस्ता छन् विशेषताहरु
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि फागुन २५ गतेदेखि १ रुपैयाँ दरको नयाँ सिक्का प्रचलनमा ल्याउने भएको छ। मुद्रा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतको टक्सार महाशाखाले साबिककै आकार तथा सुनौलो रङमा टकमरी गरिएको साल २०७७ लेखिएको १ रुपैयाँ दरको सिक्का चलनचल्तीमा ल्याउन लागेको हो। यस्ता छन् विशेषताहरु क. सिक्काको अग्र भागमा सिक्काको...
बैंकिङ प्रणालीमा थपियो एकैदिन रु. ७ अर्ब निक्षेप, कर्जा लगानी रु. १ अर्बले घट्यो
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत फागुन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप एकैदिन ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै कुल निक्षेप ४८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत फागुन १९ गतेसम्म कुल निक्षेप ४८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी यो दिन...
राष्ट्र बैंकले रु. ६.२६ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, आज बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन २३ गते ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले फागुन २५ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो चैत २२ गते परिपक्व हुन...
सुन आयातमा कडाइ, अब दैनिक १० किलोमात्र ल्याउन पाइने
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन गर्दै सुन आयातको कोटा घटाएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब दैनिक १० किलोग्राम सुनमात्र आयात गर्न पाइनेछ। यसअघि दैनिक २० किलोग्राम सुन आयात गर्न पाइने व्यवस्था थियो। रुस–युक्रेन युद्धले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा...
किन घटायो राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा ? यस्ता छन् तर्क
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो एउटा सर्कुलर जारी गरी मुलुकभित्रै पठाइने रेमिट्यान्सको सीमा २५ हजार रुपैयाँमा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै अब आन्तरिक रुपमा प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्था हटेर २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हो। रेमिट्यान्स व्यवसायी भने राष्ट्र...
आरटीजीएस प्रणाली बिहीबार सुचारु रहने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक भोलि बिहीबार बिदाका दिन पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै भोलि बिहीबार पनि आरटीजीएस प्रणाली प्रणाली सुचारु रहने जानकारी गराएको हो। विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ङ’ को ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि बिहीबार बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली...
राष्ट्रबैंकद्वारा एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन, के–के भयो फेरबदल ? (दस्तावेजसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन गरेको छ। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन गरेको हो। अब सोहीबमोजिम गर्न गराउन विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले...
राष्ट्र बैंकले घटायो स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषण कारोबार रकमको सीमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषण कारोबार रकमको सीमा घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले आज फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक विप्रेषण कारोबार रकमको सीमा घटाएको हो। अब राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सबएजेन्ट वा सबरिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक प्रतिव्यक्ति,...
नागरिक बचतपत्रमा अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने
काठमाडौ। नागरिक बचतपत्रमा अब अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिक बचतपत्रको प्राथमिक बिक्री प्रक्रिया दोस्रो संशोधन २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार नागरिक बचतपत्र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट निश्चित अवधि तोकोर बिक्री खुला गरिन्छ। लगानीकर्ताले सोही...
बैंकिङ प्रणालीमा थपियो रु. ४ अर्ब निक्षेप, सीडी रेसियोमा पनि सुधार
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुन १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप बढेर ४८ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत फागुन १३ गतेसम्म कुल ४८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पनि ५ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४३ खर्ब १८ अर्ब...
गभर्नर अधिकारीद्वारा सार्क फाइनान्स ई–न्युजलेटर विमोचन
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्क फाइनान्स ई–न्युजलेटर (Vol-2, 2022) प्रकाशन गरेको छ। आज आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ई–न्युजलेटरको विमोचन गरेका छन्। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षको हैसियतमा बैंकले उक्त ई–न्युजलेटरको प्रकाशन गरेको हो। उक्त प्रकाशनमा गभर्नर अधिकारीको सम्बोधनसँगै ४१ औं र ४२ औं ‘सार्क...
रु. ८.१३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, आज बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज फागुन १६ गते ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले फागुन १८ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो चैत १५ गते परिपक्व...
मुद्दति निक्षेपमा रु. २५ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको उक्त रकम मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो। जसअन्तर्गत बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा २० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र...